2 Siyaabaha Cudarada Playlists YouTube in Website
> Resource > YouTube > 2 Siyaabaha Cudarada YouTube Playlists
Weli saxafiyiinta YouTube videos on bog web mid mid? Dhab ahaantii, aad leedahay siyaabo kale oo loo sameeyo, iyadoo la abuurayo playlist YouTube iyo Cudarada la isticmaalayo habab ku tilmaamay in this article. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ay ku Cudarada YouTube playlist bogga internetka halkii badan videos ah. Marka hore, waxaa lagu badbaadinayo bogga internetka ee bannaan iyo dadka soo booqda uma baahna in ay hoos u wad si aad u daawato ka YouTube videos soo socda. Marka labaad, waxay yarayn doontaa bogga internetka size sababtoo ah mid ka mid ah oo kaliya code la socosho waxaa loo isticmaali doonaa, oo halkan dhaqso page loading. Saddexaad, videos la doono si joogto ah u ciyaarin oo aan la dhexgelin kasta.
Waxaa jira khasaaro ka mid ah oo keliya - waa in aad barato sidii aad u Cudarada playlist YouTube ah website-ka. Laakiin ka dib markii reading this article, waxaad arki doontaa sida ay u fududahay in. Waxaa Fiiri.
Marka hore, waxaad u baahan doontaa playlist YouTube ah. Eeg sida si ay u abuuraan YouTube playlist ah halkan u Christmas ama wax kale oo loo isticmaalo. Si aad YouTube kuu gaar ah videos, wax ka baratid Wondershare DVD Muqaal dhise >>
Habka 1: Isticmaalka IFRAME Code in Cudarada YouTube playlist
Habka 2: Isticmaalka Old Code in Cudarada YouTube playlist
Style cusub ama code saxafiyiinta gal YouTube playlist ku bilaabmaa "<iframe ...". Waa sidan sidii aad u heli kartaa YouTube code socosho playlist ah.
1. tag qaybta Playlists ee xisaabtaada.
2. Dooro playlist ee aad jeceshahay in aad Cudarada.
3. Riix Share oo soo socda Embed si ay u muujiyaan code socosho playlist ah.
4. Copy code la socosho ah.
5. dhaji code socosho ugu soo galay website ama blog.
Daawo a muunad YouTube playlist gundhig isticmaalaya code IFRAME ah.
Hoos waxaa ku qoran tusaale ah ee IFRAME ee code saxafiyiinta. Haddii aad ogtahay waxa URL playlist YouTube waa, kaliya bedeli ID playlist ah, si loo waafajiyo baahidaada ka hor saxafiyiinta xeerka gal website.
<Iframe width = "560" height = "315" SRC = "http://www.youtube.com/embed/videoseries?list= PLAYLISTID & HL = en_US "frameborder =" 0 "allowfullscreen> </ iframe>
Inkasta oo hab IFRAME ay tahay mid fudud, qaar ka mid ah daalacashada iyo adeegyada ma taageeri tag this. Xaaladahaas oo kale, waxa aad helaysaa in ay beddelaan xeerka la socosho jir.
Tan ma bixinayo by YouTube, aad si fudud u nuqul ka kartaa code hoose oo la beddelo "playlist ID" si aad u baahan tahay. Fadlan xusuusnow in la beddelo soo koobin width iyo dhererka haddii loo baahdo.
<param name = "movie" Qiimaha = "http://www.youtube.com/p/ PlaylistID "> </ param>
<param name = "allowFullScreen" qiimaha = "run"> </ param>
<param name = "allowscriptaccess" Qiimaha = "mar walba"> </ param>
<socosho SRC = "http://www.youtube.com/p/ PlaylistID "width =" 560 " height = "315"
nooca = "codsiga / x-shockwave-flash" allowscriptaccess = "mar walba"
allowfullscreen = "run"> </ socosho> </ diiddo>
Talooyin: farqiga u dhexeeya 2 Hababka ah
Sharciyadii la socosho IFRAME taageertaa labada Flash iyo HTML5 video halka style wayn ee code socosho ku bilaabmaa "<object ..." iyo taageero kaliya Flash loo maqli karo. By jidkii, ee "<socosho ..." waxaa loogu talagalay Internet Explorer.